Ahoana ny fomba hialana amin'ny mangidy: dingana 10 handresena ny ngidinao - An-Tsaina
Ahoana ny fomba hialana amin'ny mangidy: dingana 10 handresena ny ngidinao
Ny hoe mangidy dia zavatra izay ampifandraisina matetika amin'ny olon-dehibe.
Tsy teny izay matetika no ampiasainao hiresaka olona amin'ny taona 20, 30, na 40!
Na izany aza, ny mangidy dia fihetseham-po tena mitombina izay iadiana amin'ny maro amintsika amin'ny teboka samihafa eo amin'ny fiainantsika.
Io fahatsapana io dia avy amin'ny lolom-po sy ny nenina, ankoatry ny fihetsem-po hafa, ary zava-dehibe ny famerimberenana izany zavatra iainanao izany manan-kery.
Saingy tsy midika izany fa tsy tokony ho kendrenao hampihena izany.
Te hiala amin'ny mangidy?
Ireto misy torohevitra 10 ambony ho antsika raha ny amin'ny fialana amin'ny mangidy ary ny hijerena ny ho avy tsara kokoa.
1. Miverina kely.
Mora dia mora tratry ny fihetsem-po isika. Betsaka amintsika no manadino ny fanomezana toerana miaina fotsiny.
Amin'ny alàlan'ny fanesorana ny tenantsika amin'ny toe-javatra izay miteraka fihetsem-po dia afaka mahazo fomba fijery vaovao isika.
Ny mangidy dia matetika mety mitarika mahatsiaro ho tototra izaitsizy , izay mety hahatonga ny zava-drehetra hisavoritaka kokoa sy hahatsapa ho ratsy kokoa noho ny tena izy.
mahatsapa ho tsy tafiditra ianao
Makà fotoana kely hialana amin'ireo traikefa ireo alohan'ny hanohizanao ny ambiny amin'ireo teboka etsy ambany.
Sarotra amin'ny olona sasany ny manisy fihetseham-po ao an-tsaina.
Amin'ny alàlan'ny fanehoanao ny fahatsapanao amin'ny penina sy taratasy dia hahafahanao manafaka toerana sasantsasany ao an-dohanao.
Ny fihetsika ara-batana amin'ny fanoratana zavatra dia mety hitondra fiovana lehibe amin'ny fahatsapanao.
Ity dia fomba iray hifehezana ny toe-javatra raha manaiky fa misy zavatra mitranga izay mahasosotra anao.
Journaling dia fanatanjahan-tena mahafinaritra ary afaka manisy fiovana lehibe amin'ny fomba fanatrehanao ny toe-javatra.
Raha miady amin'ny fahatsapana mangidy ianao, ity dia fomba tsara hijerena zava-kendrena ary, amin'ny farany, mitady fomba hirosoana.
3. Resaho izany.
Ity fomba fiasa ity dia mety kokoa amin'ny olona sasany ary tena soso-kevitra izahay hampiasa azy io miaraka amin'ny diarinao.
Amin'ny alàlan'ny filazanao ny fahatsapanao mafy, dia miatrika ny fihetsem-ponao tokoa ianao.
Ity fanekena ity dia hanampy esory ireo fahatsapana ho meloka , izay tena fahita eo olona mangidy .
Ny fanafenana zavatra lavitra dia mety hahatsapa ho toy ny manampy azy ireo hanjavona….
… Fa ny mifanohitra amin'izay indrindra no mitranga matetika!
Ny famerana na fandavana ireo fahatsapana adin-tsaina sy lolom-po ireo dia mety hahatonga azy ireo ho ratsy kokoa satria ny fahatsapana henatra na fahatsapana ho meloka manodidina azy dia mitombo fotsiny.
Ireo zavatra ezahantsika afenina haingana dia hahatsapa ho ratsy kokoa noho izy ireo satria manilika azy ireo izahay.
Ny fahatsapana ho meloka dia ampahany lehibe amin'ny lolom-po, na mahatsapa ho meloka amin'ny fanapahan-kevitsika taloha na mahatsiaro tena ho meloka ary manenina noho ny fomba nitondrantsika olona iray.
Miresaha amin'ny olona fantatrao fa azonao atokisana ary tsapanao fa afaka misokatra miaraka aminao ianao.
Na, manandrama karazana fitsaboana amin'ny firesahana amin'ny mpanolotsaina voaofana izay afaka manampy anao hiasa amin'ny eritreritrao sy ny fahatsapanao.
Zava-dehibe tokoa ny fahamendrehana amin'ireo karazana asa ireo - hivoaka izay apetrakao amin'izany ianao.
4. Aza be resaka.
Fantatray, fantatray - torohevitra mifanipaka!
Raha mino izahay fa zava-dehibe ny miresaka zavatra, tsarovy ny fomba fiteninao.
Indraindray, ny firesahana zavatra dia mety hahatonga anao hahatsiaro indray ireo fahatsapana toy ny hoe sambany.
Ny fahatsapana ny mangidy dia mihalehibe rehefa mandeha ny fotoana, noho izany dia misy dikany fa maharitra kelikely ihany koa izy ireo.
Arakaraka ny ahitanao ny zavatra tsapanao sy ny zavatra niainanao (sy ny antony hahatsapanao fa mafy tokoa ny vitanao), dia vao mainka manome fotoana anao hiasa indray ianao.
Mino ny herin'ny fisehoana isika - izay heverinao fa lasa.
Miresaka zavatra rehefa tsapanao fa ilaina izany, nefa mametraha fetra sasany.
Azonao atao ny mikorontana sy mitaraina araka izay ilainao amin'ny andro voatondro amin'ny herinandro, fa omeo fotoana kely (na ilay olona arovanao!) Matetika ianao.
Rehefa sosotra isika dia maniry ho azy ny mitady fanazavana sy vahaolana. Mandeha hatrany ny toe-javatra izay manelingelina anao afaka toa fomba tsara hahazoana ity fanidiana ity.
Na izany aza, azo alaina lavitra loatra izy ary mety hiafara amin'ny fanaovana ratsy kokoa ho an'ny tenanao.
Tadiavo ny fifandanjana eo maneho ny fihetseham-ponao ary mamela ny tenanao ho velona.
Ny fisaintsainana dia asa fanatsarana tena mahomby izay azonao ampidirina mora foana amin'ny fiainanao isan'andro.
Na dia mandany 15 minitra isan'andro fotsiny aza ianao, dia ho hitanao fa misy fiovana lehibe amin'ny fahatsapanao.
Amin'ny fanananao fotoana kely ho an'ny tenanao isan'andro dia azonao atao ny manamarina fa manao ahoana ianao Raha ny marina mahatsapa.
Ny fahatsapana ny mangidy dia matetika tafiditra ao an-toerana ka manjary mandreraka sy mandany ny eritreritra rehetra mifoha.
Ara-dalàna izany, fa tsy mahasalama.
Betsaka amintsika no variana amin'ireo fahatsapana mangidy ka hadinontsika ny manamarina ny tena fomba fanaontsika isan'andro.
Ny fanehoan-kevitsika mandohalika dia lasa miiba haingana be rehefa mahatsapa mangidy isika.
Ohatra, ho hitantsika ho azy ny ratsy indrindra amin'ny toe-javatra rehetra, avy hatrany dia hihevitra fa manana fikasana ratsy ny olona, ​​ary handresy lahatra ny tenantsika fa mahatsapa ho ratsy isika satria mieritreritra fa izany no toetrantsika voajanahary.
Betsaka amintsika no tonga dia mamaly amin'ny ‘Reraka aho’ rehefa anontaniana isika hoe manao ahoana isika nefa tsy mieritreritra akory hoe marina izany sa tsia.
Mampiasà meditation ho fitaovana hijerena ny ao anaty ny tena fahatsapanao fa tsy ny fahatsapanao fotsiny Eritrereto tsapanao.
Ny fisaintsainana dia ahafahantsika mandinika izay tena fahatsapantsika ary afaka manampy antsika hiala amin'ny fahatsapana mangidy fotsiny amin'ny fandinihana indray ny fiainantsika ary hiditra ao an-tsaintsika lalina kokoa.
Tsy ara-drariny ny fiainana - Vahao izy io na sorena. Safidinao io.
Ahoana no hampijanonana ny maha-mpanadala-tena anao foana
Fa maninona no sarotra be ny fiainana?
Ny tena dikan'ny hoe tsara fanahy amin'ny tenanao
Toxic ve aho? Fomba 17 ilazana raha misy poizina (+ Ahoana no hijanonanao)
Fanontaniana 17 hamaly rehefa mahatsapa fa hailika na voaroaka ianao
6. Alao pumping ny rào.
Fantatsika rehetra fa ny fanatanjahan-tena dia lafiny iray lehibe amin'ny fomba fiaina ara-pahasalamana, fa fantatsika ihany koa fa sarotra tokoa ny miditra amin'ny fiainantsika be atao.
Ny fampihetseham-batana, ny fanazaran-tena, ny fihazakazahana, na ny fanaovana yoga, dia mamoaka endorphins izay mahatonga antsika hahatsapa ho tsara kokoa.
Amin'ny fanaovana zavatra mavitrika hanovana ny toe-tsaintsika dia tsy manome ny tenantsika fanajana tena sahaza antsika fotsiny isika, fa mamela fiovana ara-batana koa hitranga.
Ny fahatsapana ho mangidy amin'ny olon-kafa dia matetika avy amin'ny tsy fandriam-pahalemana iainantsika momba ny tenantsika, izay mifototra amin'ny toetrantsika na ny bika aman'endrintsika.
Tsy milaza aminao izahay fa handray fepetra henjana hanovana ny iray amin'ireo lafiny ireo amin'ny tenanao, fa ny fanatanjahan-tena dia tena tsara amin'ny fahasalamanao ara-batana, ara-tsaina ary ara-pihetseham-po.
Amin'ny alàlan'ny fifehezana vitsivitsy sy fandraisana fanapahan-kevitra mavitrika hikarakarana ny tenantsika, dia hiova ny fomba fahatsapantsika ny tenantsika.
Arakaraka ny ahatsapantsika ny tenantsika no mahasoa kokoa antsika ary tsy dia sosotra loatra isika amin'ny hafa.
7. Tohero izany!
Ny fahatsapana mangidy dia toa toa tsy avy amin'ny tsy misy.
Tampoka teo dia hitantsika fa tena sosotra na feno nenina isika.
Averina indray fa ara-dalàna izany. Tsy irery ianao no mahatsiaro ho sorena, sosotra, na tezitra - ny zava-dehibe dia ny hiala amin'ity.
Rehefa avy niaiky ny fihetseham-ponao tamin'ny alàlan'ny firesahana na ny fanoratana dia fotoana tokony hanaovana ny dingana manaraka.
Fantaro eto hoe iza no diso. Handeha amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny tenantsika isika amin'ny manaraka, fa, amin'izao fotoana izao, ndao hifantoka amin'ny fiaraha-miasa tsara kokoa amin'ireo manodidina antsika.
Raha tsapanao fa misy olon-kafa mety tompon'andraikitra amin'ny ampahany na feno amin'ny zavatra tsapanao dia atreho izany.
Raha tsy mahazo aina ianao amin'izany, dia manolo-kevitra ny hampiditra namana iray izahay ho mpanelanelana.
Ity fifandonana ity dia tsy natao hampiasa herisetra, hanodikodinam-po na handrehitra hatezerana!
Tokony ho dingana mahasalama izay ahafahanao manazava ny zavatra tsapanao ary, raha ny tokony ho izy, mahazo fanidiana.
Ataovy izay tsara indrindra vitanao mba tsy tondroy ny rantsan-tanan'ny tsiny , fa kosa hanazava ampahibemaso sy marina ny antony ahatsapanao ny zavatra tsapanao.
Ny hevitra eto dia tsy hoe mikorontana sy mimenomenona, fa tonga amin'ny fanapaha-kevitra.
Mitadiava fomba mandroso miaraka izay mifanaraka aminao, na ny fanitsiana ny fihetsika ataonao na ny fangatahana ilay olon-kafa hahafantatra bebe kokoa ny fihetsem-ponao.
8. Ho tompon'andraikitra.
Na dia ilaina aza ny miasa amin'ny fanatsarana ny tontolo iainanao, dia tsy maintsy atao izany ekeo ny andraikitra sasany noho ny zavatra tsapanao.
Diniho ny fihetsikao manoloana ireo toe-javatra samihafa ary inona no mety hahatonga ireo fahatsapana mangidy ao aminao ireo.
Eny, mety ny hafa no mahatonga anao hahatsapa ho ratsy na handrehitra fahatsapana nenina, fa tsy maintsy mijery ny ao anatiny koa ianao.
Fa maninona ianao no mitsambikina avy hatrany amin'ireo fahatsapana mangidy?
Maninona ianao no miady amin'ny fihetsem-po sasany mihoatra ny hafa?
Inona no anjara asanao amin'ny fahatsapanao?
Ireo fanontaniana ireo dia mety hahatsapa ho tsy mahazo aina ary tsy dia tsara valiana foana izy ireo.
Toetran'olombelona ny miaro ny tenantsika, izay matetika midika fa tsy firaharahiantsika ny hoe manao ahoana ny fandraisantsika anjara amin'ny fahatsiarovantsika tena.
Asehoy ny tenanao fanajana ary avelao ny tenanao handamina ny fahatsapana ao ambadiky ny zava-mitranga.
Ho fantatrao haingana inona no mahatonga ireo fihetsem-po ireo ary afaka manao dingana mahasalama ianao amin'ny fisorohana ireo trangan-javatra ireo na fanitsiana ny fitondran-tena arak'izany.
9. Mametraha tanjona ary manaova drafitra.
Amin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra mavitrika fa tsy mandalo amin'ny fiainanao manokana dia afaka manomboka mamolavola ny zavatra tsapanao sy ny fahatsapanao ny hoavinao ianao.
Safidio ny zavatra hanampy ao amin'ny kalandrie hahafahanao mahazo aina.
Mety handeha any amin'ny kilasy salsa ity, hihaona amin'ireo namanao hisotro aorian'ny fiasana, na handamina fotoana fotsiny amin'ny fotoana iray hamoahana ny famonoana aorian'ny andro iray mampiady saina.
Azonao atao koa ny mieritreritra maharitra, amin'ny fanampiana ao karazana tanjona samihafa sy fanoloran-tena.
Misorata anarana amin'ny kilasy seramika, manaova fialantsasatra tsy ho ela, na miditra amin'ny gym ary asehoy fa mendrika ny hanolo-tena ianao.
Ireo karazana hetsika ireo dia tsy vitan'ny hoe mampientanentana anao fotsiny, fa asehoy amin'ny tenanao ihany koa fa mandray am-po ny fikarakarana tena ianao.
Rehefa mahatsapa ho mangidy sy sosotra isika, dia mifangaro tanteraka amin'ireo fahatsapana ratsy ireo ka matetika tsy raharahiantsika izay tena ilaintsika olombelona.
Mamorona ny fiainana tadiavinao ho anao na dia tsy tsapanao ho mendrika izany aza ianao.
Hanjary ho zatra mankafy zavatra sy fananana zavatra andrasana haingana ianao, izay mety hahatsapa ho fiovana ankasitrahana taorian'ny fahatsapana nenina, fahasosorana ary hatezerana mahasosotra.
Sarobidy amin'ireo zavatra mahasambatra anao ianao, ary voafehinao raha manao izany ianao na tsia.
10. Fantaro ny hoavinao.
Tsy mahatsiaro fanaintainana isika raha oharina amin'ny zava-nitranga taloha satria mifikitra amin'izy ireo isika ho toy ny fomba mitohy mahatsiaro ho voaro.
Io firaiketam-po tamin'ny lasa io dia matetika no miteraka fahatsapana lolompo, lolompo ary nenina.
Ny tsy fahazoantsika aina dia tsy voatery mifandray amin'ny zava-nitranga taloha, fa amin'ny tsy fankasitrahantsika ny famelana azy ireo.
Ny fahatsapana mangidy dia azo ampifandraisina amin'ny fahatsapana asa tsy vita sy ny tsy fisian'ny fanidiana.
Manapaha hevitra fa maniry ho avy ianao izay tsy mampiditra ireo fihetsem-po ireo, ary avy eo dia ataovy izay ilainao mba hahatratraranao izany.
Famelana ny lasa mety ho mafy, saingy mamela anao handroso malalaka sy hamorona ho avy izay tsy mendrika anao fotsiny fa ho tianao tanteraka.
Toa mora kokoa noho izy io, mazava ho azy, toy ny ankamaroan'ny zavatra mifandraika amin'ny fikarakaran-tena, ny fivezivezena ary ny fivoaran'ny tena manokana.
Izany dia nilaza fa ny asa mafy dia hamaly tokoa ary hahatsapa ho tsara sy faly ary voadinika kokoa ianao - toa ny tokony ho tsapanao ihany.
inona no tadiavin'ny lehilahy amin'ny vehivavy
fametrahana ny hafa hahatsapa psikolojia tsara kokoa
zavatra tena mahafinaritra hatao rehefa mankaleo anao
zavatra holazaina aorian'ny daty voalohany
rivotra ao amin'ny hazomalahelo sambo notsongaina
zavatra mahafatifaty hatao amin'ny sakaizanao any am-pianarana
manjaka romanina vs kevin owens